Dhiirrigelinta Nabadda oo ka hortag u ah Xagjirnimada Rabshadaha - U-sinaanta Caalamiga
Hay'adda RAND waxay dhowaan sameysay qiimeyn xerooyinka teknoolojiyadda ee EAI iyo barnaamijka Wadajirka Nabadda ee Filibiin. Si loo qiimeeyo nidaamka barnaamijkan, cilmi baareyaasha RAND Corporation waxay wareysiyo qoto dheer la yeesheen 11 xubnood oo PPF ah iyo shaqaalaha EAI oo lagu eedeeyay inay wadaan barnaamijka. Warbixinta waxaa sidoo kale ku jira macluumaad ku saabsan cilmi baarista ku saabsan ka hortagga barnaamijyada xagjirka ah ee loo yaqaan 'EAI' ee ka dhaca Mindanao. Natiijooyinka waxaa lagu daabacay buug iibsi ama laga heli karo khadka tooska ah ee bilaashka ah.
Filibiin waxay sii wadaa inay la kulanto dhibaatooyinkii rabshadaha xagjiriinta, badankood waxay diiradda saareen jasiiradda koonfurta ee Mindanao iyo jasiiradaha Sulu ee deriska la ah. Hay'adda loo yaqaan 'Equal Access International' (EAI) ayaa xubno ka tirsan bulshada rayidka ah ee deegaanka ku tababartay magaalada Mindanao si ay u qaabeeyaan una hirgeliyaan ololeyaal looga hortagayo xagjirnimada rabshadaha wata (CVE).
Tababarkan waxaa lagu bixiyay labo xero oo teknolojiyad shan-maalmood ah. EAI ayaa markaa ka dooratay 11 hawl wadeeno ka socda xeryaha teknolojiyadda si ay uga qayb galaan barnaamij soconaya muddo lix bilood ah oo ah Wadajirka Horumarinta Nabadda (PPF) Barnaamijkani wuxuu u fidiyay hagitaan iyo maalgelin halgamayaashan si ay u hirgeliyaan ololahooda ku saleysan bulshada ee micro-CVE.
Si loo qiimeeyo habka loo fulinayo barnaamijkan, cilmi baarayaasha RAND waxay wareysiyo qoto dheer la yeesheen 11ka xubnood ee PPF iyo shaqaalaha EAI ee lagu eedeeyay inay wadaan barnaamijka. Intii lagu gudajiray wareysiyadan, cilmi baarayaashu waxay kaloo weeydiiyeen asxaabta PPF khibradooda intii ay kujireen xeryaha teknolojiyada. Warbixintan waxaa kujira talooyin taxane ah oo salka ku haya macluumaadka laga helay wareysiyadan si loo hagaajiyo xerada teknolojiyada mustaqbalka iyo barnaamijyada PPF.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan qiimeynta, iibso buugga, ama soo dejiso nooca PDF ee bilaashka ah halkan!